Real Estate Listings: » Residential homes » Flats » GB » West Midlands » Birmingham » Birmingham » Ifulethi elingu-1 lokuqasha eBirmingham, eNtshonalanga Midlands1
United Kingdom, West Midlands, Birmingham, Birmingham, B17 9pp
Ikhodi Yokuposa: B17 9pp
Izici: Open plan living/dining room, One bedroom, Ground floor, Modern bathroom, Contemporary fitted kitchen, Inviting master bedroom, Furnished
Isifinyezo ** Isakhiwo esisha- ifulethi likanokusho- okulala okukodwa- indawo efiselekayo * Ifulethi linikeza isikhala esiningi nokukhanya ngesiphetho esihlanzekile, sesimanjemanje, futhi futhi kusizakala ngokushisa okuphakathi nendawo okucwebezela kabili kuyo yonke indawo. Ukuthuthuka kutholakala kumamayela ayi-6 ukusuka enkabeni yedolobha, futhi kusizakala ngezixhumanisi eziningi zokuhamba ezizungezile. Kumaphakathi kokuheha okuningi kwasendaweni okufana namaGyms, iBirmingham Bullring neNorthfield Shopping Centre kanye nezikole eziningana ezizungezile. Kukhona futhi ukufinyelela ezindaweni eziningi ezivulekile, ezisezindaweni ezivuthiwe zotshani eBournville Park.Incazelo ** New Build- Apartment Luxury- One Bedrooms- Descious Location ****** zero deposit deposit option available *** Shipways are ngikujabulele ukwethula leli gumbi elilodwa lokulala ngokunethezeka ekwakhiweni kwesimanje. Ifulethi linikeza isikhala esiningi nokukhanya ngesiphetho esihlanzekile, sesimanjemanje, futhi futhi kusizakala ngokushisa okuphakathi nendawo okucwebezela kabili kuyo yonke indawo. Ukuthuthuka kutholakala kumamayela ayi-6 ukusuka enkabeni yedolobha, futhi kusizakala ngezixhumanisi eziningi zokuhamba ezizungezile. Kumaphakathi kokuheha okuningi kwasendaweni okufana namaGyms, iBirmingham Bullring neNorthfield Shopping Centre kanye nezikole eziningana ezizungezile. Kukhona futhi ukufinyelela ezindaweni eziningi ezivulekile, ezisezindaweni ezivuthiwe zotshani eBournville Park.FurnishedNew BuildGround FloorLuxury ApartmentKitchen / Living / Dining Area6.84m x 4.70m 22'5 ”x 15'5” Bedroom 14.34mx 3.01m 14 ' 3 ”x 9'11” Ngenkathi kwenziwa yonke imizamo efanelekile yokuqinisekisa ukunemba kwezincazelo nokuqukethwe, kufanele sikwazise ngalesi siqondiso noma ukulinganiselwa okulandelayo. (1) imithethonqubo yokushushumbisa imali - abaqashi abazoba khona bazocelwa ukuthi bakhiqize imibhalo kamazisi ngesikhathi senqubo yokukhomba futhi sizocela ukubambisana kwakho ukuze kungabi khona ukubambezeleka ekuvumeni ukuqashwa. (2) Le mininingwane ayiyona ingxenye noma konke okunikezwayo noma inkontileka. (3) Umbhalo, izithombe nezinhlelo kungokwesikhombisi kuphela futhi akudingekile ukuthi kubanzi. (4) Izilinganiso: Lezi zilinganiso zamakamelo cishe zenzelwe kuphela ukuqondiswa okujwayelekile. Kufanele uqinisekise ubukhulu ngokucophelela ukuze uzenelise ngokunemba kwakho. (5) Kufanele ubuze owakho mayelana nomhlaba, ikakhulukazi maqondana nempahla okufanele ifakwe / ingafakwa ngaphandle nokuthi yiziphi izindawo zokupaka ezitholakalayo. (6) Ngaphambi kokungena kunoma yikuphi ukuqashwa kwesinye sezakhiwo ezikhangisiwe, isimo kanye nokuqukethwe yilo mpahla ngokujwayelekile kuzobekwa esivumelwaneni sokuqashwa kanye nasekusungulweni kwempahla. Uyacelwa ukuthi uqiniseke ukuthi ufunda ngokucophelela futhi uyavumelana nesivumelwano sokuqasha nanoma yiluphi uhla olunikezwe ngaphambi kokusayina le mibhalo.
, B17 9pp
Izikole eziseduzane B17 9pp